Bile Rafle: Tirtirihii Taariikhdii Soomaalilaand W/Q: Cali Cabdi Coomay | Somaliland Today
← GAROWE: Madaxweyne Farmaajo Oo Booqasho Ku Imanaaya Puntland, Xili Wasiir Ka Tirsan Xukuumadiisu Socdaalo Ku Maray Gobolka Sanaag .
Sanaag Barri Miyaa La Hagraday!!! WQ: Maxamed Xuseen Jaamac (M.Somaali) →
Bile Rafle: Tirtirihii Taariikhdii Soomaalilaand W/Q: Cali Cabdi Coomay
Bile Rafle Guuleed wuxuu badhasaab ka ahaa gobolladii waqooyi ee Soomaalilaan-ta maanta wakhti ku siman sannadihii 1975 ilaa 1978. Wuxuu ahaa nin watay dhib iyo dheef is-huwan. Hasayeeshee dhibtiisa ayaa badnayd dheeftiisa. Wakhtiyadaasi wuxuu hirgeliyey dhismayaal ay ka mid yihiin, guriga xisbiga, tiyaatarka Hargaysa IWM. Sidoo kale wuxuu banneeyey waddooyin halbowle u ahaa isu socodka xaafadaha Hargaysa. Sababta uu sallaanka siyaasaddii kacaankii Maxamed Siyaad ku fuulay ayaa ahayd inay Maxamed Siyaad dhashay Bile Rafle Guuleed indeertii oo ahayd Shaqlan Warfaa Guuleed. Xeer abtinnimo ayuu Maxamed Siyaad ku siiyey derejada” Sareeye Guuto”. Wuxuu adeege daacad ah u ahaa abtigii Maxamed Siyaad iyo siyaasaddii daarood derejeyntii kacaankii Afweyne. Si aynu qodobo uga dhigno qormadan, waxa aynu
dul-istaagi doonaa dhibtii iyo dagaalkii ku salaysnaa taariikh masaxidii uu kula kacay shacabka Soomaalilaan mudadii uu badhasaabka ka ahaa Soomaalilaan oo ku suntanayd 1975 ilaa 1978.